RS485 Long Distance Access Control Reader, RS232 Long Distance Access Control Reader, Wiegand 26 Long ကအဝေးသင် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, EM4200 Long-distance Reader, 125KHz Long-distance Parking Lot Reader, Wiegand 34 Long ကအဝေးသင် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, RS485 Long Distance Parking Lot Reader, RS485 Parking Lot Long Distance Reader
Wiegand 26 Long ကအဝေးသင် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, RS485 Long-အကွာအဝေးကားရပ်နားကွင်း Reader ကို
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ် 125KHz Long-distance Parking Lot Reader, RS232 Long Distance Access Control Reader, RS485 Long Distance Access Control Reader, RS485 Long Distance Parking Lot Reader, Wiegand 26 Long ကအဝေးသင် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, Wiegand 34 Long ကအဝေးသင် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
Customizable communication formats: RS485, Wiegand 26, TTL232, SYRIS485, RS232, ABA, Wiegand 34, Wiegand 42, စသည်တို့ကို.
ပုံစံ: DC0272 စီးရီး
operating ကြိမ်နှုန်း: 125kHz
ဖတ်လို့ရအောင် chip ကို type ကို: EM4102, EM4200, TK4100 chip ကိုနှင့် 125KHz ID ကို chip ကိုနှင့်သဟဇာတ, ကိုဖတ်ရှုသာ 64bit မန်ချက်စတာကုဒ်
ဆက်သွယ်ရေး Format ကို: RS485, Wiegand 26 (WG26), စိတ်ကြိုက်ခံရဖို့နဲ့အခြားပုံစံများ: TTL232, SYRIS485, RS232, ABA, Wiegand 34, Wiegand 42
တုန့်ပြန်မြန်နှုန်း: < 0.2s ကို
ကြားကာလ Read: < 0.5 စက္ကန့်
ပါဝါကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: +DC က 12V, သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
(1A linear စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် power supply ၏ rated လက်ရှိထက်လျော့နည်းနေတဲ့ linear 12 ~ 15V DC ကသုံးပြီးအကြံပြုနှင့်မ)
operating လက်ရှိ: 70Ma
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: Wiegand 26 ≤100cm, RS485 ≤120cm
operating စို: 10-90%
built-in အင်တင်နာ: အဲဒီမှာ
ဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေး: 100M က
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 235240 × 36mm ×
Shell ကပစ္စည်း: PVC နှင့်အမှုန့်-ကုတ်အင်္ကျီ, ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဆည်မြောင်းအနက်ရောင်စေးကော်မှုန့် (ထိရောက်စွာရေစိုခံ)
Non-contact read, read distance up to 90cm, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, high sensitivity, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, အနိမ့်သောစျေးနှုန်း, anti-interference, stability.
Access control systems, အချိန်နှင့်တက်ရောက်သူစနစ်များ, buildings, ဟိုတယ်များ, residential, parking lots, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product Wiegand 26 Long ကအဝေးသင် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, RS485 Long-အကွာအဝေးကားရပ်နားကွင်း Reader ကို
prev: Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး CPU ကိုကတ် Reader ကို, anti-ကိုယ်ပွား CPU ကိုကတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
နောက်တစ်ခု: EM Card ကို / IC Card ကို Dual-ကြိမ်နှုန်း Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, LF / HF Dual-ကြိမ်နှုန်း Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို